Fikasana Hampihorohoro? Nafahan’i Sri Lanka Ireo Mpikatroka Mafàna Fo Mpiaro Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2014 9:30 GMT
Dikasary ahitana an'i Ruki Fernando nandritry ny tafatafa niarahany tamin'ny vohikala Vikalpa.org tao amin'ny YouTube
Teo amin'ny roa andro kely taorian'ny nisamboran'ny rantsana miady amin'ny fampihorohoroana ao amin'ny polisy Sao Sri Lanka olona roa mpikatroka mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona ary niteraka fanameohana iraisam-pirenena, samy navotsotra izy roa ireo avy eo.
Voasambotra ny 16 Martsa 2014 i Ruki Fernando, mpanolotsaina momba ny zon'olombelona ao amin'ny Reform, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sy i Praveen Mahesan, Mompera Katolika iray ary nampangaina ho nivarotra loharanom-baovao tany ivelany, nikasa ny hanakorontana ny fandriampahalemana nisy teo amin'ny firenena sy teo amin'ireo vondrom-piarahamonina, ary nanampy sy niray tsikombakomba tamin'ny fananganana indray ny Tamil Tigers, (Tigres Tamouls) mpikomy mpitaky fisintahana any amin'ny faritra avaratra ary mpandray anjara voalohany tamin'ny ady an-trano naharitra am-polontaonany maro tao amin'ny Nosy.
Ny mpitoraka bilaogy D. B. S. Jeyaraj dia nanoratra hoe “samy salama tsara izy roa ary tsy nisy naratra nandritra ny fitazonana sy ny fanadihadiana azy ireo.”
Nisy ireo nanely fa fikasana handemena ireo mpiaro ny zon'olombelona no nisamborana azy roa lahy ireo. Nilaza tao amin'ny vohikala famoaham-baovao CNN i Fernando nandritra ny tafatafa natao taminy fa nanontaniana azy hoe iza no olona izaràny vaovao any ivelan'i Sri Lanka. “Toa mazava tsara fa naka fepetra goavana ry zareo ireo mba tsy handrenesan'ny firenena hafa ny vaovao misy sy ny fomba fijerin'i Sri Lanka,” hoy izy.
Nahatsiaro ny resaka nifanaovany tamin'i Ruki ilay mpanoratra tantara teratany Sri Lankey antsoina hoe Roma Tearne:
Niresaka ny mponin'i Sri Lanka izay tena nila tanteraka ny fanampiany i Ruki. Nisy ilay mananontena izay vadinà mpanao saritatra nanjavona noho ny asany. Ary ireo zanany, mikorontan-tsaina tanteraka noho ny fanjavonan'ny rRainy. Nisy ny lehilahy sy vehivavy izay niharan'ny fanolanana nataon'andian'olona maromaro, ary nampijaliana, tao ireo namoy ny havan-tiany satria disoa toerana nahaterahana sy tamin'ny fotoana diso. Na ny vahoaka Tamouls, na ireo Cinghalais, na ireo Silamo, ny tsirairay, izay samy miresaka momba ny fanitsakitsahana zon'olombelona izay mitranga ao Sri Lanka amin'izao fotoana izao.
Tonga toy ny he vahaolana tohanan'i Etazonia sy Angletera (UK) ary ireo firenena hafa izay mitaky ny fanadihadiana mahaleo tena iraisampirenana momba ny famonoana olona nandritra ny ady an-trano izay nifarana tamin'ny taona 2009 ireny fisamborana ireny, hatramin'ny tokony hanolorana ho an'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'olombelona ireo olana mikasika ny fanamparam-pahefana nataon'ny fitondrana. Niatrika fiampangàna maro i Sri Lanka talohan'ny nampanginana ny tsikera avy ao anatiny mikasika io zon'olombelona mifandray amin'ny ady an-trano tao aminy io.
Taorian'ny famotsorana azy, dia nilaza i Fernando fa mbola matahotra ny amin'ny loza mety hitranga aminy sy ireo mpiaro ny zon'olombelona hafa izy.
Tamin'izany fotoana izany, niteraka fanamelohana faobe tany Sri Lanka sy tany ivelany ny fitazonana an'i Fernando sy Mahesan. Fred Carver, talen'ny fanentanana ao amin'ny Fanentanana hisian'ny Fandriam-pahalemana sy ny Rariny ao Sri Lanka, dia nilaza tao amin'ny Nouse, vaovao an-tsoratry ny mpianatra any amin'ny anjerimanontolon'i York, mikasika an'i Fernando, mpianatra fahiny tao amin-dry zareo :
Ruki sy Fr. Praveen dia niasa mafy nanohitra fotokevitra ‘mahery fihetsika’ sy mba hanorina Sri Lanka mahay mandefitra kokoa. Tena tsy rariny loatra raha ampangaina ho nanosika ho amin'ny fifandiran'ny foko izy ireo.
Ruki, amin'ny maha-Cinghalais tena mpikatroka mafàna fo azy, vonona handray an-tànana ny tolon'ireo vahoaka Tamoul niharan'ny tsy rariny, sy Fr. Praveen, izay sady teratany Cinghalais no Tamoul mpikatroka mafàna fo amin'ny fiezahana hisian'ny fifankazahoan'ny olona manana kolontsaina samihafa, dia manao ny mifanohitra tanteraka amin'izany. Ary tsy azo inoana mihitsy ny filazana fa izy ireo, izay mpanentana fanta-daza amin'ny hisian'ny fandriampahalemana, dia mety manana rohy iarahana amin'ny mpampihorohoro.
Manontany tena mikasika ny fanamelohana azy roa lahy ireo ilay mpikatroka mafàna fo, Prabu Deepan :
Inona ny asa ‘fampihorohoroana’ nataon'i Ruki & Fr. Praveen? Ny fanaovana fikarohana ireo olona maro tsy hita tany avaratra ve? #FreeRuki #Lka #HRC25 — Pd. (@prabudeepan) March 17, 2014
Inona no asa ‘fampihorohoroana’ nataon'i Ruki & Fr. Praveen? Ny fanaovana fikarohana ireo olona maro tsy hita tany avaratra ve? #FreeRuki #Lka #HRC25
Velon'ahiahy i Mohamed Hisham avy any Colombo:
Raha tena voatazon'ny mpitandro ny filaminana any kilinochchi marina i Ruki, manahy mafy aho hoe mila mivonona amin'ny ratsiratsy kokoa noho izay ireo mpanohana ny heviny & ireo mpitolona. Iza indray re no manaraka e? — Mohamed Hisham (@mhmhisham) 16 Martsa 2014
Raha tena voatazon'ny mpitandro ny filaminana any kilinochchi koa i Ruki, manahy mafy aho hoe mila mivonona amin'ny ratsiratsy kokoa noho izay ireo feo rehetra manakiana & ireo mpanentana. Iza indray re no manaraka e?
Nanamarika koa ireo mponina amin'ny aterineto fa misy hafa mpiaro zon'olombelona koa antsoina hoe Balendran Jayakumari, sy ny zanany vavy vao 13 taona izay nosamborina tao an-tranony tany Killinochchi tany avaratr'i Sri Lanka tamin'ny 13 Martsa, tokony efa ho navotsotra.
#SriLanka Mitohy ny fitazonana tsy ara-drariny ireo mpanao fihetsiketsehana ny amin'ny fitandrovana ny zon'olombelona dia i Ms. Balendran Jeyakumari http://t.co/i0dw8MYU81 — Mannfred Nyttingnes (@MannfredNikolai) 20 Martsa 2014
#SriLanka Mitohy ny fitazonana tsy ara-drariny an'i Ms. Balendran Jeyakumari, ilay Mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona http://t.co/i0dw8MYU81